काठमाडौं : नेकपा एकीकरण हुँदा गठित ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा तत्कालीन एमालेका २६ र तत्कालीन माओवादीका १९ सदस्य समेटिएका थिए । तीमध्ये एमालेमा प्रष्ट दुई गुट भएकाले केपी ओली पक्षमा १२ र माधव नेपाल पक्षमा १३ सदस्य प्रष्ट देखिए । बामदेव गौतम भने अस्थिर नै रहे ।
यो पनि पढ्नुहोस केपी ओली-वामदेव साइनो : बालुवाटारमा दुष्ट, भैंसेपाटीमा इष्ट !
बुधवार अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य थापाले पूर्वएमालेभित्रको गुटमा खेलेर समीकरण नबनाउन सुझाव दिँदा आफूहरुलाई प्रचण्डले सल्लाह र छलफलमा बोलाउन छाडेको बताए । प्रचण्डले पुराना र सिनियर नेताहरुलाई उपेक्षा गरेका कारण आफूहरु टाढिएको उनको गुनासो छ ।
प्रस्तुत छ, पछिल्लो समय प्रचण्डसँग टाढिएका स्थायी कमिटी सदस्य थापासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी–
हामी अहिले प्रचण्डकै साथमा रहनुपर्छ भन्ने रहेन । हामी त नेकपाको साथमा रहने हो । हामी पूर्वसमूहकै आधारमा प्रचण्डकै साथमा, ओलीकै साथमा वा माधव नेपालकै साथमा बस्ने हो भने यसले नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आधार बनाउन सक्दैन
ओली कमरेडको भूमिका अलिकति प्रगतिशीलजस्तो हामीलाई लाग्यो । कमरेड प्रचण्डको कुरा हामीलाई जायज लागेन
प्रचण्डले पूर्वएमालेको गुटभित्र पस्नु हुँदैनथियो । उहाँले सबै हिसाब–किताब कमरेड केपी ओलीसँगै गर्नुपर्‍थ्यो
होइन, खुमलटारमा पछिल्लोपटक जुन भेला भयो र त्यसले १३ गतेको स्थायी समिति बैठक बस्ने या नबस्ने र बस्यो भने त्यसले के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्‍यो, त्यो भेलामा पूर्वमाओवादीतर्फका सिनियर नेताहरुलाई बोलाइएन । जस्तो हरिबोल गजुरेललाई बोलाइएन । टोपबहादुर रायमाझीलाई बोलाइएन । हामी त सिनियरमा पर्दैनौं, हाम्रोचाहिँ त्यति हिसाब–किताब छैन । तर, उहाँहरु सिनियर नेता र प्रचण्डलाई लामो समयसम्म सहयोग गरिरहेकालाई नबोलाइसकेपछि नयाँ ढंगको प्रश्न पूर्वमाओवादीभित्र उठेकै हो । यसको हल नहुँदासम्म उठ्छ ।
पछिल्लो चरणमा त्यस्तोखालको भयो भन्ने छ । साथीहरुको त्यो शंका पनि होला । पुराना साथीहरुलाई भुल्ने, नयाँ साथीहरुलाई अलिकति सम्झिने भएको हो कि ? जनयुद्धबाट आएको हुनाले जनयुद्ध भएको क्षेत्रमा अलिकति उहाँको लगाव हुनु स्वभाविक छ । तर, उहाँले स्थितिको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेकपा बनिसकेपछि अब सबैको इतिहासको नयाँ मूल्यांकन हुनुपर्छ । अब जनयुद्धको मूल्यांकनले मात्र पुग्दैन । जनआन्दोलनको मूल्यांकनले मात्र पनि पुग्दैन ।
- साभार अनलाइनखवर ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, श्रावण १५, २०७७, १०:२०:३६
प्यूठानमा मात्रै करारका कर्मचारी हटाइयो आइतवार, माघ ११, २०७७ 2172